Global Voices teny Malagasy » Ny Fitsingerenana’ny Andro Nahaterahako · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Aogositra 2015 17:15 GMT 1	 · Mpanoratra مرسيل شحوارو Nandika (en) i Amira Al Hussaini, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Ny Tetezana - The Bridge
“Tsy notsofinay ny labozia satria tsy nisy herinaratra.” SARY : Joey Ganoon avy amin'ny Wikimedia Commons
Ampahany amin'ny andiany manokana  amin'ireo lahatsoratra nosoratan'ilay mpitoraka bilaogy sady mpikatroka mafana fo, Marcell Shehwaro, mitantara ny fiainana any Syria mandritra ny ady eo amin'ireo hery mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao sy ireo mitady ny hialàny ity lahatsoratra ity.
Manokatra facebook aho mba hijery ny firariantsoa amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Nanararaotra ilay fotoana aho mba hamaliana ilay firariantsoa, sy hanonerana ireo telo taona izay tsy nahafahako nandefa firariantsoa ho azy noho ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Telo taona no nigadrany noho ny nanoratany tamin'ny aterineto. Nahazatra ahy ny nandray anjara tao amin'ny haban-tranonkalany. Akhawia  no anarany.
Namana mahafinaritra i Karim Arabji .
Nandritra ny telo taona, nilalao tamin'ny mofo mamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako aho sady nitsoka ny laboziako no maniry fahafahana sy zava-tsoa ho azy. Navoaka ny fonja izy ary nandefasako hafatra tamin'ny facebook. Nandefasako firariantsoa tamin'ny fomba mihaja noho ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany izy, firarian-tsoa izay tsy ampy nampita ny haben'ny hafaliako noho ny fahafahany. Ary novaliany tamim-panajana izany.
Izay no fotoana farany nankalazanay an'i Kareem. Maty noho ny aretim-po teo amin'ny faha-33 taonany rehefa tafavoaka ny fonja izy, ary mampanontany tena anay fa inona no fampihorohoroana niainan'ilay fo, inona no nampilavo lefona azy. Nandao ity tany ity nialoha kely ny revolisiona izy.
Tena niavaka ireo firariantsoako. Nahakasika ny fahafahana mankany Amerika, ny fianarako, ny fitiavana ary ny fiainana ny sasany. Ary notsofiko ny labozia.
12 Aogositra 2011
isan-taona, ho an'io andro io, apetraky ny reniko ao anatin'ny hafalian'ny fotoan'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana ny fianakaviana. Tsy nisy afaka nandresy lahatra azy mihitsy hoe efa lehibe izahay ary mety mba hankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanay any an-kafa fa tsy ao an-trano.
Mitovy foana ny sakafo : mofo kely voasesika, zaatar, epinara sy fromazy, pizza kely izay ireharehany fa matsiro kokoa noho ny amidy eny an-tsena, taboula (karazana salady), mofo mamy vita amin'ny sôkôlà izay ahitàna ny anarako sy misy ireo labozia. Voalamina ny trano ary nanasa fianakaviana sy namana vitsivitsy izy.
Nisy ny fanomezana. Vakana misy lolo ( fony aho mbola be fanantenana, dia noheveriko ho mariky ny hery sy ny maha-vehivavy izy io). Ary nifanaraka izaho sy ny rahavaviko ny amin'izay fanomezana hovidiany ho ahy.
Nataon'ny reniko nalaza kokoa ilay fankalazana tamin'ity taona ity. Faly izy hoe salama tsara aho. Nanakiana ahy moramora momba ny horohoro nihatra taminy noho ny nataoko izy nandritra ny fety. Notsofiko tamin'ny firariana ny hahombiazan'ny revolisiona ny laboziako. Nihira hanihany ho ahy ry zareo : ” Nanjombona ny andro tamin'ny nahaterahanao.” Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nisaina aho fa izay no tena marina.
Ny faniriako : ny hionganan'i Assad. Heveriko fa tsy misy mpikomy na dia iray aza naniry zavatra hafa tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany.
Avy eo, nanana fankalazana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako hafa niaraka tamin'ireo namako aho, ireo namako fahazaza.
Tamin'io andro io, tsy nomenay lanja ny fahasamihafana ara-politika eo aminay ary nifanakalo hevitra tsy tamim-pahatsorana izahay. Izay no farany nitsofinay ny labozian'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako.
12 Aogositra 2012
Taorian'ny nahafatesan'ny reniko, tsapako fa tsy mety ny manao fankalazàna ao an-trano tsy misy azy. Mbola miakanjo mainty aho. Adinon'ireo namako fahazaza- na niniana nohadinoina- ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako. Ny tahotra ny hifamatopatotra amiko no manjary zava-dehibe mamaritra ny fifandraisanay. Nanjary fahasamihafàna ara-politika ny fahasamihafanay. Tonga fahasamihafana ara-poto-kevitra mampisaraka izay tsy voaonitry ny vazivazy, eny hatramin'ny fanesoana aza izany.
Ny maraina, tsy maintsy niatrika ny fakàna am-bavany isan-kerinandro tany amin'ny sampan-draharaha misahana ny fiarovana ara-politika aho. Nolazaiko tamin'ny mpaka am-bavany fa tena mampihomehy ny nanaovana izany amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako, ary nihomehy kidaladala izy.
Niaraka tamin'ireo vondronà namana vaovao izay vao fantatro tamin'ireo sekolin'ny toby fanampiana taorian'ny nahafahan'ny antsasak”i Allepo sy ny nironan'ny antsasany iray ho amin'ny famonjena ny maha-olona ny fankalazàko ny andro nahaterahako.
Ny fialàn'i Bashar Al Assad, ny fijanonan'ny daroka baomba any Aleppo ary ny hifaranan'ny fakàna am-bavany mandreraka no firariako. Izay no fotoana farany nitsofako ny laboziako tao an-tranon'ny fianakaviako tany andrefan'i Allepo, izay tsy azoko tsidihana hatramin'izao fa mbola fehezin'ny fitondràna.
12 Aogositra 2013
Monina any amin'ny faritra afaka any Allepo aho, efa fotoana elaela izay ary voahodidina namana mahafinaritra nantsoiko hoe ny ” vera feno tapany” nandritra ny ady.
Tsy miova ry zareo fa mbola toy ny taloha ihany. Namana tsy mahalala na inona na inona momba ny fahazazako sady tsy mbola nitsidika ny tranom-pianakaviako ireo- fa ny mampivondrona anay dia ny revolisiona. Nanomboka ny fakàna an-keriny voalohany tao amin'ny tànanako ny ISIS tamin'io andro io. Ny omalin'io dia tsy hita i Abu Maryam ary tsy nahafantatra izay vondrona naka azy izahay na tena nalaina an-keriny marina izy.
” Andro manjombona” tahaka ny teo aloha ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako, nalaina'ny ISIS an-keriny i Samar sy Mohammed. Mbola tsy hita izy ireo hatramin'izao.
Notapahan'ny feonà fipoahana izay efa zary mahazatra anay sy tsy manelingelina anay loatra ny fankalazàna. Tsotra ny mamy natolotra. Ohatra ny natao ho entina handevina ilay fehezam-boninkazo, noho ny antony maro. Nitondran-dry zareo fehezam-boninkazo iray hafa namakivaky ilay fiampitàna mampidi-doza izay mety hahafaty raha vao iampitàna fotsiny aho. Namakivaky izany ilay namako mba hiara-mankalaza amiko ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako .
Ny hiverenako any amin'ilay Allepo fantatro fahiny no niriako, sy ho an'ny fahasalaman'i Abu Maryam ary ny tsy hahitako intsony ny ISIS. Bitika izany raha oharina amin'ny haben'ny olako eto an-toerana. Tsy afaka manao firariana mahenika ny firenena aho. Tsy notsofinay ireo labozia satria tsy nisy herinaratra.
12 Aogositra 2014
Aty Gaziantep, Tiorkia aho, ary tsy afaka hiverina any Aleppo. Lasa adala amin'ilay olon-tiako sy matahotra ny hamoy azy aho. Tsy misy na inona na inona salama ato anatiko, raha izay no azo ilazàna azy. Manambatra ny heriny rehetra izy hikarakarana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsy nampoiziko ho ahy. Manasa ny namana sy fianakaviany vitsivitsy izy. Mividy fanomezana sy mifidy ny toerana izy ireo. Tena sarotra ny mamokatra fahagagana izay mifanaraka amin'ny heverintsika fa ” fahakiviako lalim-pàka”.
Tamin'ny fotoana nidirako tao amin'ilay fety sy ny nahitako azy rehetra ireo, tena tsy safononoky ny hafaliana aho. Ny mifanohitra amin'izany aza, kizintina aho. Toy ny rehefa fisehon'ny hatezerako dia nokianiko tsy ara-drariny izy : “efa nolazaiko anao fa tsy mila fety aho “. Manomboka ny mozika tamin'izay fotoana izay. Mampitsamboatra ahy ny mozika tiorka. Tsy hiverina any Allepo intsony aho. Mipetraka eo ambony seza ao amin'ilay trano fisakafoanana nohodidinin'ireo namana maro be aho. Mitomany migogogogo aho. Vala-ketraka.
Nilaozako ilay fety.
Andro tsotra. Izany no nankalazako ny fitsingerenan'ny taona nahaterahako.
Angamba efa zatra ny fiainana an-tsesitany aho.
Ny maraina, tsy maintsy manatrika ny valan-dresaka momba ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena aho.
Ny tolakandro, manana fotoana amin'ny mpitsabo ahy aho.
Ary ny alina, hihaona amin'ireo namana izay hiarahana miady hevitra politika momba ny vola Tiorka, ny faritra tsy ahitàna miaramila ary ireo hetsi-panoherana any amin'ny faritra amorontsiraka.
Tsy misy zavatra manokana avy aty amiko amin'ny ankapobeny.
Tsy misy firariantsoa.
Tsy misy labozia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/08/31/72966/
 andiany manokana : https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/dispatches-from-syriamarcell-shehwaro-on-life-in-aleppo/
 Karim Arabji: http://cyberdissidents.org/bin/dissidentsae4d.html?id=63&c=SY